14zọ XNUMX kachasị dị mma iji nwetaghachi onye aghụghọ aghụghọ - OMG Solutions
Xzọ 14 dị Irè iji jidere Cheater Red-Handed
Oge eruola ka i jiri aka gị zụọ onye aghụghọ aghụghọ ọ bụrụ na ị na-eche na ibe gị bụ onye aghụghọ nke na-aghọgbu gị. A na - ahụ ndị mmekọ na - aghọ aghụghọ n'ụwa niile na ohere ịnweta ngwaọrụ na - enyere ha aka ịgbaga n'ọhụụ gị wee gaa n'ihu na - ekwesịghị ntụkwasị obi. Ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ yiri ya echegbula ya. Can nwere ike ijide ibe gị site n'enyemaka nke teknụzụ ọgbara ọhụrụ dị ka igwefoto zoro ezo, ihe ndekọ olu, na GPS Trackers. Maka nkọwa ndị ọzọ gaa na weebụsaịtị anyị pịa ebe a. Ihe ngosi nke ihe omuma nke uche na iji teknụzụ nke oge a nwere ike inyere gi aka ijide onye gi. I nwere ike na-agụ ya ozi ederede na-elele ya Facebook ozi na-edebe ya ikwubi. E nwere ọtụtụ ụzọ iji chọpụta eziokwu na mgbakwunye na ịtụkwasị obi na ọdịdị gị na ịchọpụta ihe omume nwere obi abụọ nwere ike ime ka onye nyocha ahụ rụọ ọrụ n'ime gị. E nwere ọtụtụ nke 'n'ịghọ aghụghọ ule' ihe ịrịba ama na i nwere ike na-eleghara ma ọ bụ evading nke ga-eme ka ị ghọta ma nwunye gị bụ a aghọ aghụghọ ule ma ọ bụ. Dabere na uche gị na, ọ bụ ezie na ịlụ ya na mbido nwere ike idozi nsogbu ahụ ngwa ngwa, nyochaa ọnọdụ ahụ wee soro ụzọ 14 ndị a iji jide onye gị na ya na-acha uhie uhie.
In nwere ihe ndozi n'ihi na ekwesịghị ntụkwasị obi nke Onye Mmekọ gị?
Nke mbụ, jụọ onwe gị ma ị chere na onye òtù ọlụlụ gị bụ aghụghọ ma ọ bụ na ọ bụghị. Ikwu okwu na iru gi nwere ike inyere gi aka iwepu uzo nke ugha na nmekorita gi ka gi na ibe gi nwee ike iru. Nwekwara ike ịga nke ọ bụla n'ime ụzọ ndị a ma ọ bụ gbalịa inweta azịza na-akpali akpali site n'aka ya iji mejuo ọchịchọ gị maka ịchọpụta ma ọ bụ onye aghụghọ ma ọ bụ na ọ bụghị, yabụ na-akpali ya ikwe gị nkwa na ọ gaghị aghọ aghụghọ ọzọ. Otu ụzọ bụ iledo di gị ma ọ bụ onye òtù ọlụlụ gị ịchọ akara ndị ahụ ma ọ bụ ijide ya n'aka, n'ihi ya, anyị anakọtara nyocha a na ndepụta nke ụzọ 14 iji jide onye aghụghọ. Ekwela ka onye gị na ya nọrọ na ọchịchịrị, dịka gị onwe gị na-achụrụ ya ọtụtụ ihe, aha ikpeazụ gị dịka ọmụmaatụ. N'ebe a, anyị na-eweta ụzọ dị irè nke 14 iji jide n'aka onye aghụghọ. Anyị elu-edu ngwaọrụ ga-enyere gị aka ini enye okụtde gị n'ịghọ aghụghọ ule na onye òtù ọlụlụ maka nkọwa ndị ọzọ pịa ebe a.
1. Cheater dị gburugburu ụwa:
Chọpụtawo onye gị na ya na-eme ihe na-adịghị mma ma ọ bụ enweghị ntụkwasị obi, ma ọ bụ mgbanwe ọhụụ ọ bụla na omume ya? Ihe ịrịba ama a dịcha ebe niile. Can nwere ike ịkọ ma ọ bidola ụdị ejiji dị mma, ọ malitela ịga mgbatị ahụ iji rụpụta ọtụtụ ihe ma ọ bụ na-aga n'ihu na-enweta ederede na ozi WhatsApp. Ndị a bụ ugbu a ihe ịrịba ama bụ isi nke nwere ike ịpụta na di gị ma ọ bụ nwunye gị na-aghọ aghụghọ; agbanyeghị, ha nwekwara ike ịbụ ọrụ emeghị eme nke a ga-aghota dịka ihe ngosi nke aghụghọ. Ebe okwu a dị mkpa ma sie ike, zere imehie ihe ọ bụla ma chọọ ihe ịrịba ama iji gosi na ọ na-aghọ gị aghụghọ tupu gị erute nkwubi okwu ọ bụla. N’ikpeazụ, iso di gị na-ese ezigbo okwu ga-enyere gị aka ịkwụsị okwu ndị a ngwa ngwa.
2. Agbanwe Agbanwe:
Onye ọ bụla nwere usoro iwu kwadoro kwa ụbọchị nke ọ na-agbaso kwa ụbọchị n'amaghị ama. Onye gị na ya bi nwere ọrụ anaghị agbanwe agbanwe mgbe ọ na-aga ọrụ, mana ọ bụrụ na ọ na-atụghị anya na ọ ga-anọ n'ọfịs na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-achọ oge iji mee ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ ụbọchị ncheta nke onye ọrụ ibe gị akpọghị gị, mgbe ahụ ọ nwere ike ịbụ di na-aghọ aghụghọ . Agbanyeghi na enwere ihe ndi ozo, ndi mmadu na-eduhie ndi mmadu na-aghaghi ime ka ndi mmadu juo ha anya ma oburu na ha enweghi mmasi na ndi ozo.
3. Mgbanwe n'ụdị ihi ụra:
Ahụ mmadụ na-arụ ọrụ dị ka usoro ọmụmụ ha si dị. Ọ bụ eziokwu na nwunye ma ọ bụ nwanyị maara usoro nke onye ọlụlụ ya na usoro ihi ụra ya, mgbe ọ na-ehi ụra, mgbe ọ na-eteta, wdg. Ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ gị na-aghọ aghụghọ n'ahụ gị, ọ ga-esi n'àkwà bilie n'abalị ma ọ bụ teta n'isi ụtụtụ. n'ụtụtụ maka ezumike ekwentị, ị ga-akpachara anya maka ihe ịrịba ama nke na-egosi na ọ bụ onye aghụghọ.
4. Imegharị akwụkwọ ndụ nke PC Onye Mmekọ gị:
Ọ bụrụ na ị bụghị afọ ojuju na omume nke onye gị na ị na-eche na ọ na-aghọ aghụghọ ule na ị, e nwere ike ịbụ a foto nke ya n'anya zọpụta ya na kọmputa ma dị ka a zoro ezo faịlụ ma ọ bụ n'okpuru a random faịlụ aha. Ugbu a, ọ bụrụ na ịlele na kọmpụta ya, chọọ foto ma ọ bụ ihe ọzọ ebe niile, ọbụlagodi n'ime Recycle Bin ebe faịlụ niile ehichapụ na-achịkọta ruo mgbe ọ bupụrụ. Nke a bụ nnukwu ụzọ iji rite uru site na teknụzụ iji jide ihe aghụghọ ahụ. Iji lelee faịlụ PC zoro ezo, ịnwere ike iji YouTube ma ọ bụ Google mụta otu esi eme ya n'onwe gị, ebe ọ dị mfe ịme ma ghọta.
5. Di na-aghọ aghụghọ ga-ezochi ekwentị ya.
A doro anya na ike mgbe ọ na-akwa iko na a mmekọrịta bụ mgbe gị na onye na-agbalị izochi ya ekwentị. Ọ bụ enweghị ntụkwasị obi na ọ na-agba mbọ ịhapụ ekwentị ya site na iwere ya ebe ọ bụla ọ na-aga na-ahapụghị ya na-adịghị arụ ọrụ ebe, yabụ nke a nwere ike ịpụta na ị nwere nsogbu. Gbalịa ịhụ ekwentị ya wee chọọ ndekọ ekwentị ya, WhatsApp, Facebook, na ozi ederede ya, yana nkọwa ndị ọzọ iji chọpụta mpempe akwụkwọ enweghị ntụkwasị obi ma ọ bụ nke pụtara ìhè ma jide ya n'aka, na-egosi na ọ / ọ bụ onye aghụghọ na onye ọzọ ọgwụgwụ.
6. Mgbanwe na ahịhịa ya:
Ọ bụrụ na onye gị na ya bi abụghị ihe ngosi ejiji ma ọ bụ nke ejiji, ị ga-echerịrị ma ọ bụrụ na ọ na-ewepụ omume ya na njakịrị ọfụma ma na-agbakwụnye ihe na-ewu ewu na-eyi uwe ọhụrụ na-esi ísì ụtọ, mmega ahụ, ịkụ mgbatị ahụ, na ọtụtụ ndị ọzọ. Mgbanwe a na-eme mgbe niile anaghị eso onye aghụghọ na-azụ ahịa, mana, mgbanwe na-atụghị anya ya nwere ike igosipụta ọtụtụ ihe gbasara ma onye gị na ya so na-aghọ aghụghọ na gị. Lelee anya mgbanwe ndị ahụ nwere ike ime ka ịghara ịtụkwasị mmadụ obi.
7. Inye esemokwu ụlọ:
Ugboro ugboro na mmekọrịta adịghị mma, ọ ga-anwa ịpụ n'ụlọ mgbe ọ busesịrị gị esemokwu, ma enwere ike na ọ ga-esi n'ụlọ pụọ chee na ọ bụ onye iwe hụrụ ya. Ọtụtụ ụmụ nwanyị ekpughere na ndị di ha na-esekarị esemokwu, yabụ ọ bụrụ na nke a mere gị, nwaa ntakịrị ụzọ nledo ebe a ga-achọ ka gị soro ya mara banyere ọnọdụ ya n'okpuru ngwụrọ mgbaghara nke ịrịọ mgbaghara maka ọ bụrụ na ejidere ya.
8. Jide azụta nke na-acha uhie uhie site na iji sọftụwia:
Jiri teknụzụ na ngwaọrụ iji jide onye na-aghọ aghụghọ gị, chọpụta ihe ịrịba ama ọ bụla ma nye ihe akaebe banyere ma di ma ọ bụ nwunye gị na - aghọ aghụghọ gị ọ bụghị ma ọ bụ ụzọ bara uru iji kpughee ya. Onye gị na ya nwere ike ihichapụ WhatsApp na ederede ederede ngwa ngwa mana ịnwere ike ịnwe ndabere nke ozi WhatsApp ya. Enwere sọftụwia na-adị ngwa ngwa nke nwere ike bepu faịlụ ndabere, dịka ọmụmaatụ, nnyefe Backuptrans gam akporo WhatsApp.
9. Jide Cheater ejiri aka zuo nke sitere na njiri aka mezue
Na smartphone di gị, mepee Facebook, WhatsApp ma ọ bụ ozi ederede, pịnye na ọchụchọ ọchụchọ aha ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu ma hụ nsonaazụ na-apụta. O nwere ike ibute na onye otu gi nwere ike ihichapụ ihe ndi a; Ohere dịnụ bụ na ị ga - achọpụta ihe bara uru ịmara site na data dịnụ ma jiri ya iji jide ya.
10. Jide n'aka-acha uhie uhie Cheater na profaịlụ adịgboroja:
Ọ ga-ewe nkeji ole na ole iji mepụta profaịlụ adịgboroja na Facebook, ma ọ bụ WhatsApp, gaa mee akaụntụ adịgboroja. Ugbu a, ịnwere ike inyocha onye gị na ya na-akparịta ụka iji kpebie ma ọ̀ bụ aghụghọ ma ọ bụ na ọ bụghị. Will ga - eme ka ọ nwee mmetụta dị iche ma soro ya nwee mmekọrịta enyi iji chọta ihe nzuzo zoro ezo nke ọ na - agaghị eso gị kọwaa. Li isoro onye gị na ya mekọrịta ihe site na profaịlụ adịgboroja na-enye gị ohere inyocha nzaghachi ya, agbanyeghị, dịrị njikere ịma jijiji ma ọ bụrụ na ọ chọọ nzute. Inwe nọmba adịgboroja na WhatsApp ma ọ bụ Creatmepụta profaịlụ adịgboroja na-arụ ọrụ nke ọma na nyocha ma ibe gị bụ aghụghọ ma ọ bụ na ọ bụghị.
11. Jiri Zoro Ezo Zoro Ezo zoo Cheater:
Ọ bụrụ n ’uche gị agwa gị na mmekọ gị bụ aghụghọ, lelee ya site na enyemaka nke igwefoto zoro ezo zoro ezo n’ime ya ma ọ bụ n’ụlọ. Nwere ike ịdekọ mkparịta ụka ya nke emere n’ekwentị ma ọ bụrụ na i nwere igwe okwu. Nke a ga-aba uru nke ukwuu iji nweta ihe nzuzo ọ bụla ma ọ bụ n'ihe ọ na-eme mgbe gị na ya anọghị. Izochi nzo nzo bu ihe ozo di nma, n’ihi na nke a na - enye gi ohere inweta ihe omuma banyere okwa ya ka imuta ihunanya obula, nke gbasaa n’uwa niile, n’otu aka ahu mebie otutu mmebi n’ime otutu afo. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọrọ onye gị na ya nwere ike ịnara uru nke ngwaọrụ anyị dị mma ma gaa na njikọ maka nkọwa ndị ọzọ pịa ebe a.
12. Jiri GPS Tracker soro ọnọdụ ibe gị wee jide ya aka:
You na-echegbu onwe gị n'ihi onye gị na ya na-eme ihe na-enyo enyo? GPS ibe na GPS ga-enyere gị aka soro ọnọdụ ya ozugbo. Enwere ọtụtụ obere ngwaọrụ GPS na obere nnyefe ị ga-arapara n'ụgbọ ya ma ọ bụ ekwentị. Gịnị bụ GPS Tracker? GPS Tracker bụ nleba anya nke ọnọdụ site na iji Global Positioning System (GPS) iji soro ọnọdụ mmadụ ma ọ bụ ihe anya. Teknụzụ ọhụụ nke Global Positioning System nwere ike ịchọpụta ogologo, latitude, ụzọ ụzọ yana ọsọ ala nke ebumnuche ahụ.
Site n'iji GPS, ị ga - enwe ike soro mmegharị ya na maapụ ma chọpụta ebe ọ na - etinye nnukwu oge ya na mpụga ọfịs, nke bụ ohere kachasị mma iji jide ya na - ewere ya na ntanetị. . Ọ bụrụ na ịchọrọ inyocha di gị site n'enyemaka nke teknụzụ ọgbara ọhụrụ ị nwere ike irite uru site na ngwaahịa anyị dị elu iji chọpụta ihe ọ na-eme. pịa ebe a maka inyocha ngwaọrụ anyị dị elu.
13. Jide ya site na nyocha na nyocha:
Ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ dị ka Facebook na ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'socialntanet emeela ka nkwurịta okwu na ịkekọrịta foto na ncheta dị mfe karị. May nwere ike iji Facebook iji nyochaa weebụsaịtị, nke nwere ike inyere gị aka igosi ma onye òtù ọlụlụ gị ọ bụ aghụghọ ma ọ bụ na ọ bụghị, ebe ọ na-enye ndị ọrụ ya ohere ịlele ọnọdụ ha ma gbakwunye nyocha na fim kachasị ọhụrụ, ụlọ nri na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ị nwere ike soro . Anyị na-achọ ịlele ma tinye ihe niile dị na ụwa a nke mgbasa ozi na-achịkwa, mana nke a bụ ihe di ma ọ bụ nwunye gị nwere ike izere ma ọ bụrụ na ọ bụ aghụghọ. Agbanyeghị, ọ nwere ike itinye foto ụlọ nri ahụ ọ gara na nke onye ị na-amaghị ọtụtụ oge ma ọ bụ gaa na fim na-enweghị gị, yabụ na-ebute esemokwu n'etiti gị abụọ. Nwere ike ịjụ ajụjụ dokwuo anya ikuku na ọ bụ mgbe ị ga-enweta azịza nke ma ọ bụ onye aghụghọ ma ọ bụ na ọ bụghị.
14. Ojiji Atụrụ Kpọtụrụ:
Ọ dị mfe ịmegharị oku site na ịchekwa kọntaktị ahụ n'okpuru aha ọzọ, dịka ọmụmaatụ, 'David' kama 'Annie', ọ pụtara na ọ nwere ike igwu egwu na enweghị njide ma ọ bụrụ na ị naghị agwa oku ọ bụla ọ ga-enweta tupu ya emee . Ọ bụ oge mgbe Nledo Kọntaktị na-abata. Ọ na-ahapụ gị nyochaa gị kwuru ịghọ aghụghọ ule ibe kọntaktị na ekwentị ndekọ na ma na oku na abata na oku na ekwentị oku, na ọtụtụ ndị ọzọ. Olee otú iji ya? Ọ dị nnọọ mfe. Ugbu a download ngwa na gị ama na-azọpụta na kọntaktị nọmba nke ezubere iche maka ekwentị, nke bụ gị n'ịghọ aghụghọ ule na nọmba, na ị dị njikere inyocha. Ya mere, ị ga-enwe ike ịnweta ozi banyere oku ekwentị ọ bụla nke onye ọlụlụ gị na-eme ma ọ bụ nata, ọ bụ ezie na ịwụnye onye na-edekọ oku na ekwentị onye gị na ya ma zoo ya bara uru karịa, ebe ị ga-enwe ike ị listena ntị na oku akpọrọ ma ọ bụ nata gị ịghọ aghụghọ ule na-anọghị ya.
Nzuzo 8051 2 Echiche Taa